Madxweyne Mogabe oo xilkii hoggaaminta Xisbiga Zanu PF laga qaaday | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madxweyne Mogabe oo xilkii hoggaaminta Xisbiga Zanu PF laga qaaday
Madxweyne Mogabe oo xilkii hoggaaminta Xisbiga Zanu PF laga qaaday
Zimbabwe(SONNA) Kadib kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada Haraare ee xaryunta Dalka Zimbabwe,ayaa Xisbiga maamula dalka Zimbabwe ee Zanu-PF xilka hoggaaminta xisbiga ka qaaday madaxweyne Robert Mugabe .
Hogaamiyaha xisbigaasi ayaa loo magacaabay Emmerson Mnangagwa oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii Dalka Zimbabwe,kaasi oo horey uu xilkii uga qaaday Roberta Mogaabe.
Sidoo kale Wakaaladda Wararka Reuters ayaa baahisay in Grace Mugabe lagala noqday dhammaan shaqooyiinkii ay ka haysay xisbiga Zanu-PF.
Magaalada Haraare ee xarunta Dalka Zimbabwe ayaa waxaa ka soconaya kulamo gaar gaar ah oo u dhexeeya Mr Mugabe iyo ciidamada Militariga,waxaa la arkayaay gaadiid Militari oo ka soo baxaysa aqalka uu ka degan yahay magaaladaasi.
Talaabadii shaqada looga ereyey Mr Mnangagwa ayaa keentay qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, taas oo dhalisay in militariga uu maamulka dalka la wareego si ay 93-sano jirka Zimbabwe hoggaaminayay 37-sano, uga hor istaagaan in xaaskiisa Grace ka dhigo madaxweynaha dalka.
Tobannaan kun oo qof ayaa shalay oo Sabti ahayd ka qeybgalay dibadbaxyo ka dhan ahaa qoyska Mugabe,kuwaasi oo da dalbaday in uu xilka ka dego
Baarlamaanka Dalkaasi Zimbabwe ayaa ku hanjabay in hadii madaxwyen Mogabe oo diido in uu xilka wareejiyo ay xil ka qaadis ku sameyndoonaan.
Previous articleQaahiro oo shir uga furmay Wasiirada Arrimaha dibadda Carabta
Next articleMadaxweynaha JFS oo siweyn loogu soo dhaweeyey Magaalada Abu-Dubai+Sawiro